octobre 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
IVOM-BOKATRY NY SAMPANA FIFOHAZANA
Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao. Nisy fivorian’ny ankatoky ny fandraisana taloha’izany.
Alahadin’ny SAFIF androany. ANDRIANJAFIMASY Harinaivo no nitarika ny litorjia. RAZAFIARIMALALA Nathalie Christine, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Solontena avy amin’ny STK no nitarika ny hiran’ny Fiangonana.
Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 66 :1-4.
Noredonina ny hira SAFIF 359 : 1-2 “ JESOSY O! INDRETO NY OLONAO ” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina.
Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.
5 MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY
RAVEROMBOLAMANANA Fanja, mpampianatra ao amin’ny K6 no nitarika izany. Natsangana ny ankizy sy tanora nihira ny FFPM 772 : 1 “ MANATONA AN’I JESOA IZAO ”. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia hoe : » Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa » KOL 2 : 6. Ny antony andehanantsika aty dia fihaonana amin’ Andriamanitra. Mila manapa-kevitra handray an’i Jesoa isika raha mbola tsy nanao izany. Mivavaha fa hitany izany na tsy ren’ny olona aza. Ampiharina eo amin’ny fiainana izany fampianarana izany. Tsy manao izay tiany intsony ny olona fa manaraka an’i Jesoa. Tantaran’i Paoly no natao : i Paoly dia tsy voataiza araka ny tokony ho izy, tsy tia fianarana, lasa mpangalatra ary nigadra, teny am-ponja no nahenoany ny Filazantsara, tao no niovany fo, lasa Mpitandrina “ aumônier “ izy ankehitriny. Nanaraka ny fotoanan’ny Sekoly Alahady ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM 357 : 1 « EFA TONGA ATY IZAO ». Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain-dRAZAFINDRAKOTO Tatamo.
Namaky misesy ny ISA 7 : 1-9 ; JAO 4 : 46-54 ; KOL 2 : 4-7 kosa RASOANAIVO Lalao.
Natao ny hira SAFIF 205 : 1-2 ” RANON’AINA IZAY TENA MATEZA “ mialoha ny toriteny.
Ny JAO 4 : 46-54 no andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra androany.
Fanomezam-pahasoavana ny asa fanasitranana. Fahagagana faharoa nataon’i Jesoa tao Kana no resahina eto taorian’ny fahagagana tany Galilia izay nanovana ny rano ho divay. Famantarana na “signe” ny hevitry ny “miracle”. Misy zavatra tian’ Andriamanitra ambara ao anatiny fa tsy fahagagana fe fahagagana fotsiny ihany.
1) Ny kristiana miroso amin’ny finoana an’i Kristy dia mamela ny maha-izy azy ny tena ka manatona an’i Jesoa. Nanao dia lavitra ity tandapa ity saingy tsy nataony sakana izany ary nanetry tena izy, izy no nanatona an’i Jesoa. Na teo aza ny voninahitra dia nampandeferiny izany satria fantany fa mahay ny zavatra rehetra i Jesoa noho ireo asa efa vitany. Tao anatin’ny fahamoizampo izy noho ny aretina nahazo ny zanany, nentiny teo amin’i Jesoa ny olany. Fantany fa vitan’i Jesoa ny fanasitranana ny zanany eo ambavahoan’ny fahafatesana. Rehefa tojo zava-tsarotra isika dia manadino an’i Jesoa. Mampianatra antsika ny Teny eto mba hitondrantsika ny manahirana antsika rehetra (adintsaina, olana) eo amin’i Jesoa Kristy. Mitaky finoana sy fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra izany.
2) Ny kristiana miroso amin’ny finoana an’i Kristy dia mankato sy mino ny Tenin’Andriamanitra
Mety ho hafa no zava-niseho raha namikitra ny voninahiny ity tandapa ity. Na tsy nankany an-tranon’ilay narary aza i Jesoa dia tonga ny fahasitranana. Tsy nisalasala tamin’ny finoany ity tandapa ity : noho ny Tenin’i Jesoa tafatoetra tao am-pony dia tsy kivy izy ary nino izay nolazaina taminy. Nankato ny Tenin’Andriamanitra izy. Entanina isika hankato ny Teny, tsy hihahanahana.
3) Misy fiantraikany amin’ny manodidina anao ny fiainanao ny finoanao
Misy fotoana malalaka eo amin’ny asan’ny fifohazana ho fijoroana vavolombelona, fizarana hanehoana ny hatsaran’Andriamanitra. Ny asan’ny fifohazana dia tsy tanteraka rehefa tsy misy finoana, izay no isian’ny Tenim-pahefana hanorenana ny asa sy fampaherezana izay atao. Manjary fantsom-pamonjena ho an’ny hafa ihany koa izay mino. Ny aretina noheverina ho fahafatesana no tonga fifaliana sy fahavelomana. Finoana no ilaina fa tsy tokony hiandry famantarana.
Na dia tsy nahita an’i Jesoa aza isika dia eo hatrany ny Teniny. Meteza ho tahaka ity tandapa ity amin’ny lafim-piainantsika rehetraa. Tsy mitsahatra hanao fahagagana Andriamanitra.
Mila mamela ny maha-izy azy antsika isika, manatona Azy, mino sy mankato dia mijoro vavolombelona. Na dia tsy mbola nahita vokatra aza isika dia nanana finoana (fanehoana ny zavatra tsy hita).
Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah. IV) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.
Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain’i BODOVOAHANGY Yasmina. Nisy ny famakiana ny hafatra Foibe SAFIF.
Nisongadina tamin’izany ny fanorenana toby eny Ambohimanga Rova noho ny faha-40 taona. Ny raharaham-piangonana no nambara taorian’izay.
RAKOTOMANANA Andry no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny JAO 4 :50b nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana :
Avy amin’ny FJKM : Antso ho amin’ny fanampiana ny kere any Atsimo, raisina ao amin’ny sekreteram-pinagonana ny laharana MVola, havoaka amin’ny gazety Marturia Vavolombelona ny lisitr’ireo hanome tolotanana.
• Manohy fianarana ny katekomena “ MIJORO “ ;
• JAO 17 no vakiana amin’ity herinandro ity ;
• Sabotsy 31 oktobra 2020 amin’ny 10 ora sy sasany maraina : Fivoriamben’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena ;
• Fotoam-bavaka alahady 01 novambra 2020 amin’ny 10 ora maraina handraisana ny katekomena : izy ireo sy ny akaiky azy ihany no afaka manatrika izany fotoana izany fa kosa halefa mivantana amin’ny pejy facebook-n’ny Fiangonana ny fotoana hahafahantsika miombompo, ny amin’ny 7 ora kosa dia ho an’ny rehetra ;
• Ny sampana efa mivory dia : ny RFF sy ny Hasin’ny Famonjena rehefa sabotsy, ny STK rehefa alahady, ny Dorkasy rehefa talata
• Sabotsy 7 novambra 2020 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro ao amin’ny Akany Rainimamonjy : fivoriamben’ny VFL
• Ar 2 513 900 no vola niditra nandritra iny herinandro iny.
Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.
Natao mialoha ny fanononana ny voady ny hira SAFIF 328 “ NY ANTSONAO ANDRIAMANITRA O”!
RALAINDIMBY Haja no namaky ny voady taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny JER 33 : 3. Nisy ireo nisaotra sy nangata-bavaka : raim-pianakaviana mandalo fotoan-tsarotra mba hahazo ny rariny, afaka nifindra kilasy ambony kokoa ary mametraka ny tohiny amin’ Andriamanitra. Ny hira FFPM 444 : 4 « RY RAIKO FENO ANTRA » no natao nandritra ny fanatazana ny rakitra. Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny SAFIF 10 : 5 ny fanatitra. Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa sy fampaherezana ny fotoana.
ASA VAVOLOMBELONA : ASA SY FAMPAHEREZANA
Ny nitarika ny fotoam-bavaka ihany no nidina teo amin’ny alitara nanao ny fampidirana.
Nohiraina ny FFPM 175 : 1-2 « AVIA FANAHY O ! FANAHY MASINA O » nandritra ny fiomanan’ny mpiandry. Novakiana ny Teny fanorenana ny asa masina ary RASOLONJANAHARY Fidy no nanohy ny fitarihana. Natsangana teny an-toerana ny Fiangonana nangetaheta nomena Teny : fandraisana famelan-keloka, fampaherezana, fikasana tsara, vavaka. Nandritra izany ny mpiandry teny an-toeranay dia nanangana ny tanany ankavanana. Namonjy ny toerany ny mpiandry. Ny Mpitandrina nitory Teny tamin’ny Fiangonana dia nanolotra hafatra sy nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana.
Nisaorana an’Andriamanitra ny fahatontosan’ny fotoana rehetra androany. Nentina amim-bavaka ireo nanao voady ; ny adim-piainana manerana izao tontolo izao ; ny SAFIF manerana ny FJKM sy eto anivon’ny fitandremana Amparibe ; ny sampana velona rehetra hamoa voa tsara harenesan’ny olona rehetra ny Filazantsara ; ny Mpitandrina sy ny ankohonany ; ny Biraom-Piangonana sy ny kristiana rehetra ; ny fivorian’ny Mpiandrikaitra Foibe FJKM ; ny firenena malagasy manoloana asan-jiolahy, haintrano, aretina… mba hahery. Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka fangataham-pitahiana.
Natao avy hatrany ny hira SAFIF 313 « ISAORANAY ZANAHARY ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira SAFIF 324 : 1 » TSY MISY SOA HO AHY AFA-TSY I JESOA » nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité. Nirava ny Fiangonana tamin’ny 11 ora sy 46 minitra tao anaty feon-javamaneno.
Mpitendry : HARENTSOA Rova
Nikirakira ny fanamafisam-peo : RAKOTOVOLOLONA Lova Nosy
Diakona : Vaomieran’ny Asa Vavolombelona sy Vaomieran’ny vola (rakitra sy varavarana)
Naka sary : RAKOTONDRAMBOA Andry